NIO သည် စင်ကာပူ တွင် ဒုတိယ စာရင်း ပြု ရန် စဉ်းစား နေသည် - Pandaily
Jan 26, 2022, 19:22ညနေ 2022/01/26 23:12:32 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Xinao သည်ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် စင်ကာပူ တွင် ဒုတိယ စာရင်း ပြု ရန် စဉ်းစား နေသည်။IFRဒီ ကိစၤ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီကေနႛ ေဴပာ သၾားပၝတယ္။ NIO ကေတာ့ ေစ်းကြက္ ေကာလာဟလ ေတြအေပၚ မွတ္ခ်က္ ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Xiaopeng Automobile သည် ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ တစ် လအကြာတွင် Lee Automobile သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက် နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဟောင်ကောင်ရှိ NIO ၏ စာရင်းကို အတည်မပြု ရသေး ပါ။ အဓိကအားဖြင့် ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သည် အသုံးပြုသူ ယုံကြည်မှု အပါအ ၀ င် ၎င်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေး သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
User Trust Holdings သည် NIO ကိုတည်ထောင် သူ၊ ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် စီအီးအို ဝီလျံ လီ ၏ ကတိက ၀ တ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရှယ်ယာ ရှ င်များအား IPO ကမ်းလှမ်း မှုတွင် အသုံးပြုသူ များနှင့်အတူ ကြီးထွား ရန်နှင့် NIO ကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုသူ ဗဟိုပြု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်စေသည်။ လီ သည် အစုရှယ်ယာ သန်း ၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး သုံးစွဲ သူများအား သူ ရရှိသော ငွေများကို စွန့်ပစ် ရန် အခွင့်အရေး ပေးခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူ ယုံကြည်မှု ၏အဓိက အချက်မှာ သုံးစွဲ သူများအား ဂေဟစနစ် ကိုတည်ဆောက် စဉ် ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာ များ ၏အကျိုးကျေးဇူး များကို ခံစား ခွင့်ပြု ရန်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် NIO နေ့တွင် NIO ၏ဒုတိယ စာရင်း နှင့် ပတ်သက်၍ လီက “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူတွေအတွက် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဆုံး အစီအစဉ် တွေလုပ် မှာပါ။ လောလောဆယ် မှာ အထူး အစီအစဉ် အသစ် တွေ မရှိ သေးဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အစီအစဉ် အရ NIO သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ET7 အပါအ ၀ င် မော်ဒယ် သစ် သုံးမျိုး ကိုပေးပို့ လိမ့်မည်။ စျေးကွက် ဝေစု ကိုတိုးချဲ့ ရန် NIO သည် ရန်ပုံငွေ ပိုမို လိုအပ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:NIO သည် အာမခံ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရန် ဒေါ်လာ ၇. ၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
IFR ၏အစီရင်ခံစာ အရ NIO သည်ဟောင်ကောင် စာရင်း ဆိုင်းငံ့ထား စဉ် စင်ကာပူ တွင် စာရင်းသွင်း ရန်စ ဉ်း စား နေသည်။ အင်္ဂါနေ့က NIO ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၇. ၈ ဘီလီယံ ကို အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီ သည်၎င်း၏ အစုရှယ်ယာ ၅% အထိ ရောင်းချ မည် ဟုယူဆ ပြီး ဒေါ်လာ ၁. ၉ ဘီလီယံ ခန့် မြင့်တက် နိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာ ကဆိုသည်။ သို့သော် ထို ကိစ္စနှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သူတစ် ဦး က NIO သည် ဟောင်ကောင်ရှိ ၎င်း၏ အစီအစဉ်ကို လုံးဝ စွန့်လွှတ် လိမ့်မည် မဟုတ်ဘဲ ဟောင်ကောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေး သွား မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Tags ∗Bytedance | ∗Didi Chuxing | ∗Luckin Coffee | ∗Tencent | ∗xiaohongshu | 996.ICU | aerospace | Alibaba | automotive industry | Autonomous Driving | Beijing Winter Olympics | Blockchain | bribery | Bytedance | CES | China | China VC Weekly | Coffee Chain | commercial rocket | delivery service | Digital Currency | Douyin | E-cigarettes | E-Commerce | e-yuan | electric vehicle | Featured | financing | fintech | Food | freshippo | Haidilao | Hot Pot | internet community | Internet company | Investment | IPO | Li Auto | LIDAR | market regulation | massive layoff | mobile internet | Music | NIO∗ | Online Education | overseas markets | regulation | retail coffee chain | ride-hailing platform | Robot | social media | Social network | technology | Tobacco | Winter sports | Xiaomi∗ | XPeng Motors